Gabadh Fagaare Caalami ah si Dhiiran ugu Boorisay Madaxweynaha Rwanda inuu Aqoonsado Somaliland | Waxsansheeg News
You are here : Waxsansheeg News » War » Gabadh Fagaare Caalami ah si Dhiiran ugu Boorisay Madaxweynaha Rwanda inuu Aqoonsado Somaliland
Gabadh Fagaare Caalami ah si Dhiiran ugu Boorisay Madaxweynaha Rwanda inuu Aqoonsado Somaliland
Posted by Nuux Abdi on October 12th, 2019 07:33 AM | War
Waxa qabsataysaxaafadda bulshada oo aad loogu baahiyeygabadh dhallinyaro ah oo reer Somaliland oo la yidhaahdo Suhuur Fatxi Mukhtaar oo si dhiirran Madaxweynaha Rwanda Paul KagameFagaare ku sugnaakaga dalbatay inuu aqbalo rabitaankashacbiga oo uu aqoonsado Jamhuuriyadda Somaliland oo ah dal buuxiyey shuruudihii dawladnimo.
Tallaabada ay qaaday Suhuur waxay ka turjumaysaasida shacabka Somaliland ay ugu adag yihiin difaaca iyo iibgeynta qaddiyadda madax-bannaanida Jamhuuriyadda Somaliland.
Suhuur Fatxi Mukhtaar oo ka qaybgashay Shirka isku xidhka dhallinyarada Afrika (YouthConnekt Africa) oo ay soo qaban qaabisayWasaaradda Dhalinyaradda Rwanda oo kaashanaysa hay’ado ay ka mid ahaayeen UNDP.
Gabadhan oo shirka dhexdiisa ka mid noqotay dadfursad u helay ay su’aalo ku weydiiyaan madaxweyne Kagame, waxaana iyadoo shucuurteedu sarreysay ay tidhi;”Magacaygu waa Suhuur waxaan ka imid dal la yidhaahdo Somaliland.waxaanan kaaga mahadcelinayaa sidaad halkan (Ruwanda) noogu soo dhaweysay. Waxaan ku faraxsan nahay inaan halkan kuugu soo qadimayaa codsi ee kuma weydiinayo su’aal.”
“Waxaad ka warqabtaa inuu dalkayagu yahay mid nabdoon oo xasiloon. Waxa kaloo aanu leenahay dawlad shaqeynaysa, waxaannu leenahay dastuur, hase ahaatee wali aqoonsani kama aanu helin caalamka iyo dalalka Afrika.Sidaas darteed, waxaannu kaa codsanayaa adiga (Madaxweynaha Ruwanda) inaad aqbasho dalabkayaga oo aad na aqoonsato,”ayey si dhiirran u tidhi Suhuur Fatxi.
MadaxweynahaRwanda Paul Kagame wuxuu uga jawaabaysoo jeedinta gabadhaas reer Somaliland, si taxadir ka muuqday oo uu is ururinayey waxaannuyidhi; “Waxaan u malaynayaa inaad ii dirayso shaqo adag. Waayo waxa jira shuruuc caalamiya oo jidaynaya qaabkaloo aqoonsanayo dawlad ama dal, waxaan filayaa inaad arrintaas u halgamaysaanilaaaad ka xaqiijinaysaan oogaadhaysaan qaddiyadiinna.”
Mr. Paul Kagame wuxuu intaas ku daray “Waxaad muddo ka tirsanaanjirteen Soomaaliya, intaas kadib tiro dambiyo ah ayaa dhacay sax iyo khalad waxay doonaan ha noqdeene’ markaa waxaad bilowdeen inaad noqotaan Somaliland.Waxaad leedihiin waxaannu doonaynaa inaanu xor ahaano. Xukuumaddii Federaalka Soomaaliyana waxay leedahay ‘maya annaga ayaad naga mid tihiin’ markaasidaad sheegtay waxay noqonaysaa inaadhawlihiina wadataan wax kasta oo ay noqonayso.”
Suhuur Fatxi oo mar labaad makarafoonka qabsatay ayaa madaxweynaha Rwanda u sharraxday guulaha ay Somaliland gaadhay waxaanay tidhi “Haa Madaxweyne,waxaan doonayaa inaan idhaahdo waxaanu buuxinay shuruudihii qaranimo, waayo waxaanu leenahay dastuur, xudduudo iyo dawladnimo shaqeynaysa. Waxa kaloo aanu leenahay shacab, waxaanan xornimadayadii la soo noqonay 27 sannadood ka hor. Sidoo kalena waxaannu ku guulaysanay inaanu qabanno doorasho hal qof iyo hal cod ah, waxaanse wali u halgamaynaa sidii aanu ku kasban lahayn aqoonsi.”
Madaxweynaha Rwanda wuxuu xog warrankaSuhuur kaga jawaabay ayaayidhi “Sidaad sheegtay waxaad qaadeen tallaabooyin badan, sidaad uga gun gaadhaysaan waxay noqon kartaa dhawaan ama barito.”
« Taariikhda Dhabta Ah Ee Fatra Soomaliga–Aabihii Qorista Farta Soomaliga Nuxurkeeda Xigmadeeda By Muuse Galaal Ilaahay Haw Naxariistee, Hoos Ka Akhri Waxabadana ka Ogoow Geesigaaga.By Omer Xaashi Saalax Gadheere Balidhiig.
Dowladda Soomaaliya mar kale xayiraad ku soo rogtay duulimaadyada tooska ah ee tagga magaalada Kismaayo »